Home Wararka Sharif Sheekhuna Maye “Dadka ka danbeeya dibad baxyada gacan bir ah ayaan...
Sharif Sheekhuna Maye “Dadka ka danbeeya dibad baxyada gacan bir ah ayaan ku qabaneynaa”
Ku-simaha Madaxwaynaha Koonfur Galbeed, C/qaadir Shariif Sheekhunaa [Maye] ayaa shaaciyay in dibad-baxyadda rabshadaha wata ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay Baydhabo ay hurinayaa dad dano gaar ah ka leh.
Afhayeenka Gollaha Wakiiladda Koonfur Galbeed oo aanan magac-dhabin shaqsiyaadka uu eedeeyay ayaa ku nuux-nuux saday inay ku oor-kac-sanayaa xariga Mukhtaar Roobow Cali [Abuu Mansuur].
Maye oo luqad adag ku hadlaya ayaa hoosta ka xariiqay inay ku qaban-doonan xubnahaasi gacan-bir ah, isaga oo ku waaniyay inay joojiyaan olalaha ay uga abuurayaan hawiga qalafsan caasimada KMG maamulkaan.
Xiisadda ka dhalatay xariga Mukhtaar Roobow, oo kamid ahaa Mushariixiinta ugu cad-cad doorashada loo balansan yahay 19-ka bishaan December, ayuu Gudoomiye Maye balanqaaday in xal laga gaari doono.
“Shacabka badankooda waa kuwa wanaagsan..Balse, waxaa jira inyar oo ka faa’idaysanaya xaaladda [oo hurinaya]…Waxaana ugu baaqaynaa inay ka waan-toobaan..Hadii kale gacan adag ayaa lagu qabanayaa,” ayuu yiri.
Khamiistii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay Abuu Mansuur kasoo xirtay Baydhabo ee xarun goboleedka Bay, waxaana tan iyo xilligaasi xaaladda magaalada ay ahayd mid aad u kacsan.shee
Previous article(Deg Deg) Ciidamo tiro badan oo Baydhabo lagu daadiyay & Isgaarsiinta oo laga jaray
Next articleFarmaajo oo loogu baaqay in uu karti iska raadiyo kuna daysado Theresa May
Shirkii hordhaca ahaa ee Dowlad Goboleedyada & Villa Somalia oo fashilmay.
Xildhibaano badan oo mooshin ah ilaalinta kootada dumarka u gudbiyey guddoomiye...